Voaroaka i Mojitos, Music ary Shots: Antoko tsy voafehy ny fizahantany South Beach
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana US » Voaroaka i Mojitos, Music ary Shots: Antoko tsy voafehy ny fizahantany South Beach
Vaovao Mafana US • Naman'i eTurboNews • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Ny isa lehibe indrindra ho an'ny mpitsidika an-taonany maro amin'ny fiatoana lohataona any South Beach Florida. Florida dia namaritra ny valiny lojika amin'ny fizahan-tany mampirisika COVID-19. Tsy mandeha ny kaomandy vonjy maika farany nataon'ny ben'ny tanàna hanokana ny South Beach. Mpanaparitaka super-developera any South Beach dia mety manimba zavatra bebe kokoa noho ny tsara ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany ao amin'ny Sunshine State
State of Emergency dia nanambara tao South Beach, Miami, Florida hifehy ny mpizahatany amin'ny faran'ny lohataona.
South Beach Hotel The Clevelander dia mitarika ny tsy fanomezana sakafo ho an'ny mpizahatany
Tsy afaka nanery sy nifehy ny vahoaka tamin'ny tifitra ny polisy
Ny tanànan'ny Miami Beach tany Florida, Etazonia dia nanambara fanjakana vonjy taitra ny sabotsy ary nametraka fe-potoana tsy voafehy mba hifehezana ny vahoaka marobe lohataona. Ireo mpizahatany dia tsy nijanona mba hiala voly, mety hahafaty mahafaty.
Ny tranga tany Florida dia nihoatra ny 2 tapitrisa tato ho ato. Ny fanjakana koa dia manana tranga amerikana betsaka indrindra amin'ny fiovan'ny COVID-19 vaovao avy amin'ny Fanjakana Mitambatra. Tsy manana fameperana i Florida amin'izao fotoana izao fa fanolorana fitandremana ho an'ny mpandeha.
Nosokafan'i Florida tsikelikely ny trano fandraisam-bahiny, hotely fisakafoanana, trano fisakafoanana ary zaridaina fialamboly mba hanohanana ny fivezivezena amin'ny fizahan-tany sy fizahan-tany maharary.
South Beach dia fitsangatsanganana sy fizahan-tany any Florida ho an'ireo izay tia manao fety. Ny freins amin'ny lohataona manokana isan-taona no toerana ankafizin'i Amerika. Ity dia faran'ny herinandro fialan-tsasatry ny lohataona, ary ity no faran'ny herinandro izay ahafahan'ny fahafinaretana toy izany mahafaty noho ny isa COVID-19 efa be any South Florida.
Ny famporisihana ny famantarana ny hanokafana indray ny fizahan-tany eto an-toerana dia nahasarika mpitsidika marobe tamin'ity taona ity hihazakazaka hihazo ny South Beach amin'ity faran'ny herinandro ity.